Habibiana, vonon’olona mahatsiravina: renim-pianakaviana iray maty notapahan-doha | NewsMada
Par Taratra sur 12/12/2018
Renim-pianakaviana nitsirara tamin’ny tany, mihoson-dra tanteraka, tapa-doha no hitan’ny olona tao amin’ity tokantrano iray, tao amin’ny fokontany Ambodihazomamy, distrikan’i Sambava, ny zoma lasa teo. Tsy iza fa rangahy vadiny ihany no nahavanona ity loza mahatsiravina ity. Karohin’ny zandary izy io amin’izao fotoana izao.
Nampihoron-koditra sady nampivarahontsana! Nitrangana vonoan’olona mahatsiravina tao amin’ny fokontany Ambodihazomamy, kaominina ambanivohitr’i Morafeno, distrikan’i Sambava, ny zoma hariva lasa teo. Renim-pianakaviana iray, 27 taona antsoina hoe Razanamaro Servienne. Araka ny fanazavan’ny zandary, mpamboly ny asan’ity renim-pianakaviana ity ary hita faty tapa-doha sady nihosin-dra tao an-tranony izy. Ny vadiny, antsoina hoe Jean Edino, 27 taona ihany no tompon’antoka tamin’ny famonoana am-badiny satria notapahim-badiny tamin’ny antsibe ny lohany. Ny asabotsy maraina tamin’ny 6 ora kosa vao nisy nahatsikaritra ny fatin’ilay renim-pianakaviana nihosin-dra teo amin’ny tany. Tapaka ny tendany ary nipetraka teo akaikin’ny vatany ny lohany. Tsy hita kosa ny nanjavonan’ilay raim-pianakaviana nahavanon-doza.
Araka ny fanazavan’ireo olona mahafantatra tsara azy mivady, voalaza fa hasarotam-piaro diso tafahoatra no nitarika izao vonoan’olona feno habibiana izao. Mamon-drongony i Jean Edino tamin’ny fotoana namonoany am-badiny, raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana. Voalaza fa tsy tao an-trano ilay renim-pianakaviana fa namonjy lanonana, ny zoma maraina. Nony tonga tao an-trano anefa izy ny hariva, efa nandrasam-badiny tamin’ny hatezerana ka niafara tamin’izao famonoana mahatsiravina izao. Nokapainy tsy nananany antra ny loham-badiny. Fantatra efa nandrangitra ilay antsibe ilay raim-pianakaviana nahavanon-doza mialoha ny nahatongavam-badiny. Tonga teny amin’ny toerana nahitana ny loza ireo tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana niaraka tamin’ny dokotera sy ny zandary avy ao amin’ny poste avancé Farahalana nanao ny fanadihadiana.